Xubin ka tirsan xisbiga SD oo loo maleeynayo inuu halis ku yahay ammaanka Iswiidhan | Somaliska
Xubin baarlamanka uga tirsan xisbiga xagjirka ah ee SD ayaa farta lugu fiiqay inuu yahay nin ammaanka dalka halis ku ah.
Ninkan oo lugu magacaabo Egor Putilov, ayaa wararku sheegayaan inuu magacyo been ah ku isticmaali jiray maqaallo iyo qoraallo uu qoro. Qabiir dhinaca ammaanka ah ayaa warkan u sheegay idaacada wararka Iswiidhan u faafisa ee Ekot.
Waxaa sidoo kale la tilmaay in uu yahay nin magacyo badan qaata, hase ahaatee saxaafadu ku taqaano Egor Putilov, islamarkaasin gacan saar la leh kooxo falal dambiyeed sameeya oo ka yimid Sankt Petersburg ee dalka Ruush-ka. “Waxaa uu ka dhex shaqeeya gudaha baarlamaanka, waana nin aan cid xayirta jirin, taasina waxaa ay keeni kartaa in uu hello macluumaad badan” sidaasi waxaa aaminsan Lars Nicander oo ah madaxa waaxda baarista kuliyadda difaaca. Putilov ayaa muddo gaaban waxaa uu ka howlgalayey laanta socdaalka halkaas oo gacan yare ka ahaa qeybta qaabiladda qaxootiga.
Wwel welka ninkan laga qabo ayaa xisbiga xagjirka ah ee SD waxaa ay sheegen ineeysan jirin sabab xagooda u sameeyaan baaritaan la xirriira Putilov wel welna ayan xaggooda ka qabin. Ugu dambeyntiina afhayeenka xagga ammanka u qaabilsan xisbiga Moderaterna ayaa ku baaqay in warbixnadda la xirriira Putilov yihiin kuwou baahan in si weyn isha loogu hayo marba hadeey jirto cabsi xitaa soo wajihi karta siyaasiinta dalka iyo ammaan-kaba.
Asc saxiib jimcaale waan kusalamay waa adigii markaad war kasomaqasho heey ada socdaalka sotabin jiray oo dhahijiray goaana cusubaa sobaxay ee maxadan ushegeeyn hadalkii dhawaan kasoyeeeray dowlada sweden eey sheegtay in eey albaabada ufuraysa dadka diidmada haysta siloosiyo daganaasho hadeey jirin sabab muuqato oo wadankoodii dibloogucelinkarin waad mahadsantahay